आँखा सुन्दर बनाउने मस्काराले कतै हाम्राे स्वास्थ्यमा हानी त गरिरहेको छैन् ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
धेरै जसो महिलाहरुले हरेक दिन सुन्दर देखिनका लागि मेकअप गर्ने गर्छन् । तर, धेरै जसो महिलाहरुलाई मेकअपको राम्रो ज्ञान हुदैन । मेकअपको राम्रो ज्ञान नहुदा हामीले हाम्रो अनुहारलाई सुन्दर बनाउनु भन्दा पनि यसलाई बिगारिरहेका हुन्छौं ।
धेरै जसोलाई थाहा हुदैन कस्तो सामानको प्रयोग कहाँ गर्नु पर्छ । भनेर साथै यसको गुणस्तरको बारेमा थाहा नहुदा राम्रो हुनु भन्दा पनि नराम्रो हुनुका साथै स्वास्थ्यमा समेत हानी पुग्न सक्छ । यस्तै महिलाहरुले प्रयोग गर्ने विभिन्न मेकअप सामानका मध्य मस्कारा एक हो ।
मस्काराले आँखालाई आकार दिएर ठूलो देखाउनुका साथ साथै आँखाको सुन्दरतालाई बढाउँने गर्छ । आँखामा लगाउने हुने भएको करण हामीले मस्कारा लगाउन भन्दा अगाडी मस्काराबारे सबै जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ ।
दैनिक प्रयोगका लागि वाटर प्रुफ मस्काराको खरीद गर्नु हुँदैन । मस्कारा खरिद गर्दा हामीले सुख्खा मस्कारा छ कि छैन, त्यसमा रहेको ब्रस कस्तो छ भनेर ख्याल गर्न निकै जरुरी छ । महिनौ अघिदेखि राखिएको मस्कारा जमेमा वा गाढा भएको खण्डमा त्यसलाई पातलो बनाउनका लागि पानीको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
मस्कारा प्रयोग गर्नु अघि आँखामा भ्यासेलिनको प्रयोग गरेमा मस्कारालाई धेर बेर सम्म टिकाउन सकिन्छ । आँखामा इन्फेक्सन भएको बेलामा मस्काराको प्रयोग गर्नु हुदैन । यसले अझ हाम्रो आँखामा इन्फेक्सनको सम्भावना बढाएर आँखा कम्जोर बनाएर हामीलाई अन्धो समेत बनाउन सक्छ ।
मस्कराको प्रयोग गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरु
१.मस्कारा खरिद गर्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार व्रशको छनौट गर्नुपर्छ । किनकी मस्कारामा दुई तरीकाको ब्रश हुन्छ, एकले फूल भोल्यूम इफेक्ट अर्थात परेलालाई बाक्लो देखाउँछ भने अर्को हाई डेफिनिशन ल्यासेजले परेलालाई आकर्षक देखाउँछ ।
१.मस्कारा खरिद गर्दा बाक्लो छ कि, सुख्खा छ कि भनेर ख्याल गर्न जरुरी छ ।
२.मस्कारा खरीद गर्दा ब्रशलाई खोलेर भित्र बाहिर गर्नुहुन्न । अन्यथा, ब्रशमा हावा भरिएर मस्कारा विग्रन सक्छ ।
३.दैनिक प्रयोगका लागि वाटर प्रुफ मस्कारा खरीद गर्नुहुँदैन ।
४.परेला बाक्लो भएमा क्लियर वा ट्रान्सप्यारेन्ट मस्कारा लगाउनु पर्छ । किनकी परेला बाक्लो भएमा अझै त्यसलाई बाक्लो बनाउनु पर्दैन । सेप मात्र दिए पुग्छ ।
५.कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गर्नेहरुले मस्कारा लगाउनु पूर्व नै लेन्सको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
६.मस्कारा लगाउँदा जरादेखि नै मिलाएर लगाउनु पर्छ ताकी परेला लामो देखियोस् ।
७.मस्कारा लगाउँदा दाँया बायाँ फैलिएमा सुखेपछि मात्र पुछ्नु पर्छ । नसुकिकन पुछ्यो भने मेकअप खराब हुन्छ ।
८.मस्कारा लगाउँदा जहिले वपन माथि फर्काएर मात्र लगाउनु पर्छ ।
९. मस्कारा जमेमा वा गाढा भएमा त्यसलाई पातलो बनाउन पानीको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
१०.आँखामा कुनै प्रकारको एलर्जी भएमा पनि मस्कारा लगाउनु हुँदैन ।
११.आँखा सानो भएमा कालो आइलाइनर वा मस्कारा लगाउनु हुँदैन । अन्यथा, आँखा अझै सानो देखिन्छ । त्यसैले यस्ता आँखामा जहिले पनि व्लु सेडको मस्कारा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
१२.आँखामा डार्क सर्कल भएमा आँखाको तल्लो परेलामा मस्कारा लगाउनु हुँदैन ।
१३.छालाको रङ्ग गोरो भएमा कालो मस्काराको सट्टा डार्क ब्राउन मस्कारा लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
यसरी गर्ने सानो आँखाको मेकअप
मानिसको आँखा सुन्दर र संवेदनशील अंगमध्येमा पर्छ । व्यक्तिअनुसार आँखा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । साना, चिम्सा, ठूला, मुन्द्री भएका, मुन्द्री नभएका र सुन्निएको खालका ।
आँखा आफैँमा सुन्दर हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बुझाइ वा रुचिअनुसार थोरै मेकअप गरेर फरक देखाउन सकिन्छ । आफूलाई मन परेको लुक्स दिन सकिन्छ । साना र चिम्सा आँखालाई थोरै ठूलो तथा सुन्निएको जस्तो देखिने आँखालाई सामान्य देखाउन सकिन्छ । अब जानौँ केही टिप्स :
सुन्निएको जस्तो आँखा
कसैको आँखा सानो मात्रै नभएर सुन्निएको वा पुक्क परेको हुन्छ । आँखालाई सामान्य देखाउन क्रेजभरी लाइट अथवा न्युड कलरको आइस्याडो लगाएर हल्का स्मोकी बनाउँदा सुन्दर देखिन्छ । साइड गाजल पनि लगाउन सकिन्छ ।
सानो तर मुन्द्री भएको आँखा
आँखा सानो भए पनि मुन्द्री भएको छ भने लाइट अथवा न्युड कलरको आइस्याडो क्रेजमा लगाउनुपर्छ । त्यसपछि ठिक्क (धेरै पातलो पनि होइन, धेरै मोटो पनि होइन)को गाजल र मस्कारा लगाउँदा सुन्दर देखिन्छ ।
परेला बाक्लो भए आइल्यासेस लगाउन जरुरी छैन । यदि, एकदमै पातलो भए नेचुरल देखिने खालको आइल्यासेस लगाउन सकिन्छ । यदि, त्यो पनि नभए परेलाको भोल्युम उठाउने मस्काराको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यो पनि नभए लुज पाउडर लगाएर मस्कारा लगाउन सकिन्छ । आँखाको मेकअप गर्दा मस्काराचाहिँ अनिवार्य लगाउनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा आँखीभौँ हो । यो कस्तो बनाउने भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ । आँखीभौँ कोर्दा अनुहारको सेपलाई ध्यान दिन जरुरी छ । लाम्चो वा सानो अनुहारका लागि हल्का भी सेपमा हल्का घुमाउरो र मध्यम तरिकाले कोर्नुपर्छ । यदि, ठूलो अथवा गोलो अनुहार भए सीधा र पछाडिको भाग काटिएको जस्तो र हल्का मोटो कोर्नु राम्रो हो ।
घरमै बसेर हामी आँखाको मेकअप गर्न सक्छौँ । यद्यपि, मेकअप गर्दा विशेष सर्तकता भने अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न उत्पादनको प्रयोगमा विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । सकेसम्म राम्रो ब्रान्डको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ । दैनिक मेकअप गर्दा आँखाको बनोटअनुसार गर्नुपर्छ ।
चिम्सा र साना आँखा
चिम्सा र साना आँखा भए फुल कट क्रेज हल्का स्मोकी बनाउँदा आँखा सुन्दर र ठूलो देखिन्छ ।
Don't Miss it भुइँमा सुत्ने बानी बसाल्दा सताउँदैन कुनै समस्याले
Up Next यस्ताे सानाे सानाे बानीले गर्दा तपाइकाे कपाल तथा छाला बिग्रीरहेकाे छ, जान्नुहाेस्
दिनभरी काम गर्दा हामीलाई थकाइ महसुस हुने गर्छ । थकाइको कारण हामीलाई काम गर्न मन लाग्दैन । कोहि मानिसलाई छिट्टै…
भुटेको मकै खानुका यति धेरै फाइदा, क्यान्सरको खतरा समेत कम गर्छ – जानिराखौँ
तपाई हामीमध्ये कतिपय भुटेका मकैका पारखी छौँ होला । भुटेको मकैको स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा गर्छ। यी हुन भुटेका मकैका फाईदा…
के हो माइग्रेन ? यसका लक्षण र उपचार बिधि जान्नुहोस्
माइग्रेन विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तीमध्ये पिरियडिक माइक्रेन पनि एक हो, अत्याधिक टाउको दुख्ने । माइग्रेन टाउको दुखाइको एक प्रकार हो।…
हामीले जीवनमा स्विकार्नै पर्ने सत्यहरू यस्ता छन्, जान्रुहाेस्
जीवनमा हामी सिधा हिड्न चाहान्छाैँ, तराइकाे चाैडा र पक्की बाटाेमा सरर गाडीमा गुडे जस्लै । तर, जीवनकाे बाटाेमा अकल्पनीय घुम्ती…
तामालाई हिन्दु परम्परा अनुसार पवित्र धातु मानिन्छ। र यसलाई वैदिक कार्यहरुमा अनिवार्य मानिन्छ । तामाको भाँडामा राखिएको पानीलाई ‘ताम्रजल’ भनिन्छ…